मरेका कुखुराको व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्ध, रोगको महामारी फैलने त्रास – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मरेका कुखुराको व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्ध, रोगको महामारी फैलने त्रास
२०७१ बैशाख ३१, बुधबार ०२:३९ गते
भरतपुर । पंक्षी रोग निदान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि ल्याइएका मरेका कुखुराको व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्ध बढेको छ । भरतपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय नजिकै रहेको प्रयोशाला वरपरको क्षेत्रमा दुर्गन्ध बढेपछि रोगका महामारी फैलने त्रास बढेको छ ।
‘मरेका कुखुराको सिनोको गन्धले बसी साध्य छैन’, एक स्थानीयले भने, ‘गर्मी बढ्दो छ । यो दुर्गन्धले रोगको महामारी लेला भन्ने डर छ ।’ जिल्ला पशु सेवा कार्यालय भरतपुरका पशु चिकित्सक महेन्द्रप्रसाद शाह पनि मरेका कुखुराको दुर्गन्ध बढी नै भएको बताउँछन् ।
प्रयोगशालामा अहिले दैनिक ६० वटाका हाराहारीमा मरेका कुखुरा परीक्षणका लागि ल्याइने गरिन्छ । देशकै सवैभन्दा ठूलो पंक्षी रोग निदान प्रयोगशालाले मरेका कुखुरा नष्ट गराउन वा जलाउनका लागि भनेर ल्याइएको इन्सिनेटर मेसिनसमेत प्रयोगमा नल्याई त्यसै थन्काइएको छ ।
अहिले मरेका कुखुराहरुलाई इनारजस्तै गहिरो खाल्टोमा राखिएको छ । जसले दुर्गन्ध बढाएको स्थानीयको भनाइ छ । तर प्रयोगशालाले भने मरेका कुखुरा परीक्षणपछि त्यसै नफालेको दावी गरेको छ । ‘बायोलोजिकल पिट अर्थात् जैविक खाल्टो (एक किसिमको इनार) मा राखेर मरेका कुखुराको व्यवस्थापन गरिएको छ’, प्रयोगशालाका पशु चिकित्सक डा. विजयकुमार श्रेष्ठले भने, ‘गन्ध नआहोस् भन्नेमा प्रयोगशाला सचेत छ ।
‘अहिले गन्ध माथि जाओस् भनेर नै लामो पायप राखेर ग्यास फाल्ने काम भएको छ’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘अहिले जति ग्यास बाहिर आउँछ त्यसको गन्ध नमीठो भए पनि मानवीय स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भने छैन ।’
मरेका जीवजन्तुबाट एमोनिया, मिथेन, कार्वनडाइअक्साइडजस्ता ग्यास निस्कने गर्छ । जुन मानवीय स्वास्थका लागि हानिकारक हुन । मरेका कुखुरामा हुने अन्य जिवाणुले पनि गंभीर प्रभाव पर्ने गर्छ । प्रयोगशालाका चिकित्सकहरु भने खाल्टोमा राखिएका कारण यहाँ यस्ता जोखिम नरहेको दावी गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कृयाशीलहरु भने जति सक्दो छिटो त्यो दुर्गन्ध अन्त गर्नुपर्ने माग राख्छन् ।
‘दुर्गन्ध नआहोस् भन्ने हो भने मरेका कुुखुरालाई इन्सिनेटरमा राखेर जलाउनुपर्छ’, चिकित्सक शाहले भने । तर इन्सिनेटर चलाउन खर्चिलो भएको प्रयोगशाला बताउँछ ।
‘खर्चका हिसावले इन्सिनेटर चलाउन सकिने अवस्था छैन’, प्रयोगशालाका प्रमुख डा. जयनारायण न्यौपानेले भने ।
देशकै मध्यभागमा रहेको चितवन हरेक वर्ष कुनै न कुनै रोगको महामारीमा पर्ने जिल्ला हो । यही जिल्लाकै सदरमुकाम भरतपुरमै अवस्थित पंक्षीरोग निदान प्रयोगशालामा आउने कुखुराको सिनोले अहिले दुर्गन्ध बढाउँदा पनि त्यसको नियन्त्रण गराउनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । एक स्थानीयले भने, ‘जसरी हुन्छ दुर्गन्ध हटाउनतर्फ सरोकार निकायको ध्यान पुगोस् ।’